China One Way Lashing ifektri abakhiqizi | SPC
I-One Way Lashings iyindlela esheshayo futhi eyongayo yokuthola imithwalo ekuhambeni ngaphandle kwesidingo sokutshala imali emihlanganweni ejwayelekile yamaRatchets ne-Strap.
Lolu hlobo lohlelo lokuqhuma luphinde luveze amanye amathuba okonga izindleko. I-webbing ingahlinzekwa ngama-reels aqhubekayo ayi-100m noma ngamasaka angama-200m angancishiselwa kubude obuqondile bokufaka umthwalo othize. Ngenxa yalokho ukonga izindleko kutholakala ngoba akukho ukubopha okushiywa kungasetshenziswanga njengemihlangano yohlobo lweRatchet Strap.
Amandla aqine kakhulu
Kuqinisekiswe yi-TUV Rheinland
Kufanele bonke abathwali
Kuhlanganiswe nezinye izinhlelo zokuvikela izimpahla - isb. Izikhwama zemijondolo
Ukubopha indlela eyodwa yokuvikela (Lashing) emafulethini, kujantshi nakuziqukathi
Akunabungozi bokulimala kwabathumeli nabazisebenzisayo ekusebenziseni noma ekuvuleni izintambo
Okungaxhunyaniswa nemichilo yama-ratchet abizayo nezintambo zokubopha ezinamandla.
Langaphambilini Ingaphakathi le-Van Logistic Strap
Olandelayo: Isihlilingi se-Eye to Eye Webbing
Igama lento Ububanzi Ukwephula Amandla Umbala Ukupakisha
Enye indlela yokweluka ukuqhuma kwe-Web 25 800 okumhlophe I-200m eqhubekayo esikhwameni esisodwa se-poly.
28 1000 okumhlophe
35 2000 okumhlophe
38 3000 iwolintshi
50 5000 okumhlophe
50 7500 iwolintshi
Lapho kuhlanganiswe kahle okuwukuphela kwendlela yokukhipha i-One Way Lashing ukusika ukubopha. Lokhu kungenziwa eduze kwebhakede ukuze kukhuliswe ukugcinwa kwewebhu okusetshenzisiwe noma lapho kukhona khona okulula.
Kufanele kuvezwe ukuthi amabhakede "yiNdlela eyodwa". Ngenzelwe ukuthunyelwa ngendlela yezomnotho futhi hhayi ukuthi isetshenziswe futhi. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlelo zinokufakwa kwewebhu okuncishisiwe kusetshenziswa isiphikisi esikhethekile esizimele se-ratchet esenzelwe ukusebenzisa amandla amakhulu kakhulu kulokho okusetshenziswayo bese kususwa futhi kugcinwe. Ngenxa yalokho izindleko zomhlangano wokuqhutshwa komkhumbi ohanjisiwe zihlala ziphansi futhi ukubopha akukwazi ukuhlehliswa ngaphandle kokuthi kusikwe.